Live - Hurricane Irma - Bulsho ayaa loo isticmaalaa in ay dhexgalaan geospatial - Geofumadas
Live - Hurricane Irma - Bulshadu waxay u egtahay in ay la falgaleyso geospatial
Sebtember, 2017 Geospatial - GIS
Waxaa xiiso leh sida xogta juqraafiyeed maalin kasta ay u adeegto macaamiisha, illaa iyo heerarka farsamooyinka hore loo soo qaatay, sida meteorology, oo hadda la adeegsanaayo sawirrada muuqaalka iyo muuqaalku waxay u baahan yihiin wax ka badan hal qof oo xirfad leh. Inkasta oo aanu hubno in xirfadlayaasha mawduuca ku barokacsan, sii hayaan niyadjabkooda ka hor qaar ka mid ah showmen oo si dhib leh u celiya sida parrots.
Tusaalaha ka mid ah sawir-qaadaha ku-xidhan galkan waxaa ku jira muuqaalo aad u xiiso badan, oo ku xiran xogta loo yaqaan 'feed data', ee xiriirka qaraabo ee waqtiga dhabta ah.
Ugu dambeyntii, waxaa jira faa'iido ay bulshadu ku caanbaxayso in ka badan iyo ka sii daba-gal. Dhammaanteen waan ku guuleysanay.
Post Previous«Previous Shaqaaleynta loo jeedo GIS. Qosol iyo xaqiiqda
Post Next Tiknooloojiyada Geospatial, Doorka iyo muhiimadda ku jirta habka IT-ga ee Waaxda Gaadiidka.Next »